Qodobbada Jordan Feise ee ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Jordan Feise
Macaamiishaadu waxay noqonayaan kuwo xog ogaal ah, awood badan, dalbanaya, garasho leh, oo aan lagaran karin. Xeeladaha iyo jaangooyooyinkii hore maba la jaanqaadayaan sida dadku go'aan uga gaadhayaan maanta dhijitaalka iyo adduunyada ku xidhan. Iyadoo la hirgelinayo suuqgeeyayaasha tikniyoolajiyadda waxay awood u leeyihiin inay aasaas ahaan saameyn ku yeeshaan sida noocyada ay u arkaan safarka macaamiisha. Xaqiiqdii, 34% isbeddelka dhijitaalka ah waxaa hoggaamiya CMOs marka la barbar dhigo keliya 19% oo ay hormuud ka yihiin CTOs iyo CIOs. Dadka suuqleyda ah, isbedelkani wuxuu u yimaadaa sidii